‘डिडिएलजे’को २१ वर्ष, फिल्ममा लुकेका केही तथ्यहरु ! | www.aagopani.com Halloween Costume ideas 2015
‘डिडिएलजे’को २१ वर्ष, फिल्ममा लुकेका केही तथ्यहरु !
मुम्बई, ४ कार्तिक । ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे’ अर्थात् ‘डिडिएलजे’ बलिउडमा एक रेकर्ड तोड्न सफलत तथा ब्लकबस्टर फिल्म हो । जुन फिल्मले केही कलाकारलाई नयाँ पहिचानमा दिएन उचाइमा समेत पु¥याए । यो फिल्म रिलिज भएको २१ वर्ष पूरा भएको छ । तर अहिले पनि यस फिल्मलाई केही च्यानलले प्रसारण गर्दै आएका छन् ।
‘राज’ र ‘सिमरन’ बीचको एक प्रेमकथा बोकेको यसै फिल्मले शाहरुख खान र काजोलको करिअरमा ले नयाँ उचाइ लियो । यो निर्देशक आदित्य चोपडाको पनि पहिलो फिल्म थियो । यो फिल्म रिलिज भएपछि सहरमा मात्र नभएर गाउँघर र कुनाकाप्चामा समेत चर्चा चल्यो ।
निर्देशक चोपडाले यस फिल्ममा टम क्रुजलई हिरो राख्न चाहेका थिए । फिल्मको नाम समेत यसअघि अर्कै थियो । ‘द ब्रेवहर्ट विल टेक द ब्राइड’ नाममा उनले हलिउड हिरो टमलाई राख्न चाहेका थिए । तर, उनले यस फिल्ममा शाहरुखलाई रोजे । सुरुमा शाहरुख यो फिल्म गर्न चाहेका थिएनन् । तर, निर्देशकले धेरैपटक शाहरुखको ढोका ढक्ढक्याएका कारण उनी राजी भएका थिए । यदि शाहरुखले नमानेको भए यस फिल्मको हिरो सैफ अली खान हुन्थे । यो फिल्मको नाम ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ भने किरण खेरले फाइनल गरेकी थिइन् ।
फिल्ममा शाहरुखले लगाएको फेमस लेदर ज्याकेट उदय चोपडाले क्यालिफोर्नियाको बेकर्सफील्डमा हार्ले डेविडसनको शोरूममा ४ सय डलरमा किनेका थिए ।